Guri | TRINITY
TRINITY waxay bixisaa xalka xirfadeed ee alaabta guryaha ee caalamiga ah ee loogu talagalay meelaha wadajirka ah.
Kiiska Hoteelka Dayax ee Hoteelka
Kiiska Guryaha Guryaha Lagu Iibinayo
Kiiska Qalabka Guryaha ee La Joogay
Qalabka Qalabka Guryaha Dadweynaha
$ $ $ Soo-saare Soo-saare Hoteelka Naqshadeeya
Foshan Zhongsen （TRINITY） waxay bixisaa xalal qaas ah oo caalami ah oo loogu talagay Hotels, Resorts, Villas, Apartment iyo goobo kale oo wadajir ah sida maqaayadaha iyo dhismayaasha dadweynaha.
Abuur badeecada ugu tayada wanaagsan warshadaha oo samee alaab aad u fiican.
TRINITY waa soo saare alaabta guryaha hudheellada ah oo bixin kara xalalka alaabta guryaha ee xirfadleyda ah.
Qolka fadhiga ee qolka - alaabada guryaha ganacsiga
Qolka fadhiga ee qolka - alaabada guryaha ganacsigaFuraha Keydka: Qalabka guryaha ee hudheelka ganacsiga.Nooca alaabta guryaha: Alaabta guryaha.Adeegsi gaar ah: hoteelka hoteelka.Codsi: Hoteel, dalxiis, aqal adeeg, villa, makhaayad, aagag kale oo dowladeed.Qaabka qaabeynta: Naqshadeynta casriga ah.Qalabka: alwaax adag, gudi, maqaar, dhar, bir, bir, marble.Shahaadooyinka: Iso9001 / SGS / PEFC.
Qolka qolka guryaha ee guriga - alaabta guryaha ee hoteelka
Qolka qolka guryaha ee guriga - alaabta guryaha ee hoteelkaFuraha Furaha: Qalabka guryaha ee Hotel.Mashruuca Hoteelka: Mai House Saigon Hotel - 5 xiddig ayaa lagu qiimeeyay.Nooca alaabta guryaha: Alaabta guryaha.Adeegsi gaar ah: hoteelka hoteelka.Codsi: Hoteel, dalxiis, aqal adeeg, villa, makhaayad, aagag kale oo dowladeed.Qaabka qaabeynta: Naqshadeynta casriga ah.Qalabka: alwaax adag, gudi, maqaar, dhar, bir, bir, marble.Shahaadooyinka: Iso9001 / SGS / PEFC.
Qolka fadhiga qolka - Xirmooyinka alaabta guryaha ee hoteelka
Qolka fadhiga qolka - Xirmooyinka alaabta guryaha ee hoteelkaFuraha Furaha: Xirmooyinka alaabta guryaha ee qolka hoteelka.Nooca alaabta guryaha: Alaabta guryaha.Adeegsi gaar ah: hoteelka hoteelka.Codsi: Hoteel, dalxiis, aqal adeeg, villa, makhaayad, aagag kale oo dowladeed.Qaabka qaabeynta: Naqshadeynta casriga ah.Qalabka: alwaax adag, gudi, maqaar, dhar, bir, bir, marble.Shahaadooyinka: Iso9001 / SGS / PEFC.
Kicite qolka qaabeynta alaabta guryaha - alaabada hoteelka
Kicite qolka qaabeynta alaabta guryaha - alaabada hoteelkaKeyword: Alaabta Hoteelka Bottique.Nooca alaabta guryaha: Alaabta guryaha.Adeegsi gaar ah: qolka jiifka ee hoteelka.Codsi: Hoteel, dalxiis, aqal adeeg, villa, makhaayad, aagag kale oo dowladeed.Qaabka qaabeynta: Naqshadeynta casriga ah.Qalabka: alwaax adag, gudi, maqaar, dhar, bir, bir, marble.Shahaadooyinka: Iso9001 / SGS / PEFC.
Waxaan wali ku adkeysaneynaa ku tiirsanaanta go'aan qaadashada iyo aaminsanaanta, daawashada alaabooyinka ayaa sii wadaya inay horumariyaan oo ay horumariyaan, ugu dambeyntiina, kaliya iyada oo loo marayo heerar sare ayaan ku guuleysan karnaa tartanka muddada dheer!
Sida aasaasiga u ah xallinta hoyga martigelinta, waxaan ku faanaynaa Nidaamka Wax Soo Saarida ugu Dambeeya ee loogu talagalay in lagu keeno qiimaha ugu wanaagsan mashruuc kasta oo aan qabanno. Ka sokow Nidaamkayaga Soo Saarida ee End-to-End, waxaan haysannaa warshado guryo aan gaar u leenahay oo u oggolaanaya macaamiisheenna inay ku raaxeystaan ​​faa'iidooyinka isku dhafan ee ugu wanaagsan xagga qiimaha, tayada iyo hufnaanta.
Waxaan leennahay warshado ku dhexyaal guriga noo gaar ah oo u oggolaanaya macaamiisheenna inay ku raaxeystaan ​​faa'iidooyinka isku dhafan ee ugu wanaagsan xagga qiimeynta, tayada iyo hufnaanta. TRINITY waxay bixisaa adeeg caadiya oo loogu talagalay alaabada hoteelka waxayna soo bandhigtaa xalka alaabta guriga.
Shirkadda waxay leedahay inka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah oo ay ku habeynayso qalabka hudheelka, xallinta qalabka guryaha hoteelka, rakibaadda goobta, iwm.
Alaabooyinka leh tayo la hubo-
Nidaamka dhammaan alaabooyinka waa in si adag loo shaqeeyaa oo loo gudbiyaa kormeerka, hubi in daqiiqad kasta oo faahfaahsan ay si fiican u buuxiso baahida macaamiisha.
Meelaha Juquraafi ahaan lagu Filan karo
Foshan Zhongsen （TRINITY） alaabta guryaha Co., Ltd. waxay ku taalaa badhtamaha maraakiibta badweynta Baasifiga, Hindiya iyo Badweynta Atlantikada, taas oo Shiinaha u dhoofisa koonfur-bari Aasiya, Oceania, Bariga Dhexe iyo Afrika.
Kooxda Kala Bixinta
Haddii ay yihiin maamuleyaal mashruuc hoteel, maareeyeyaal macaamiil ah, naqshadeeyeyaal, maareeyayaal wax iibsanaya iyo farsamayaqaanno hoteel, dhammaantood waxay leeyihiin asallo kala duwan oo ay wadaagaan xiisaha ay u qabaan dhammaystirka shaqada wanaagsan.
Inta badan howlaha aan dhiibno waa kuwo si gaar ah loo sameeyay - waana weenjoythe caqabado gaar ah oo ay soo bandhigaan.
Zhongsen waa lamaane ku habboon isla markaana soo saare ka ah hudheellada hudheellada la habeeyay oo horumarsan.
Mashaariicda ugu badan ee aan fulino waa kuwo si gaar ah loo sameeyay, waana ku raaxeystaa caqabadaha gaarka ah ee ay keenaan. Naqshadeeyaasheena soo-saareyaasha guryaha waxay ku siin karaan talo-bixin xirfadeed qiimo leh oo ku saabsan agabka iyo qurxinta iyadoo la hubinayo in naqshaddu ay tahay mid quruxsan oo adag. Markii la ogolaado, waxay ka dhigan tahay awoodaha wax soo saar ee gurigayagu inay si dabacsan ula qabsan karaan agabyada iyo alaabada la dhammeeyay. Waxaan sidoo kale si dhakhso leh ula socon karnaa waxyaabaha si aan ula kulanno waqtiga kama dambeysta ah. La xiriir TRINITY si aad u bixiso xalalka alaabta guryaha ee xirfadleyda ah.
Xallinta Macaamiisha OEM
Si joogto ah u xoqin badeecadaada si joogto ahna u hagaaji farshaxankaaga.
Waxaa caado u ah qolka jiifka qolka martida ee casriga ah ee loo qoondeeyay America JW Marriott Spa Hotel Mashruuca
Sinnde Foshan Shiinaha Shan Shan Stars Naxdin Naxdin Naxdin IHG Hotel Alaabta guryaha
Shunde Foshan Shiinaha Shan Shan Stars Naxdin Naxdin Naqshadeynta IHG Hotel Alaabta guryaha.
Shan xiddig oo St Regis Hoteelo Hoteelo Hoteelo Hotel
Alaabta Talyaani ee loo habeeyay